musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » Hotera Pennsylvania muManhattan inotungamirwa neCOVID-19
Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Zvakanakai Hotel Pennsylvania
Imwe hotera inoyevedza iri pakati peguta reManhattan iri kuvhara mikova yayo zvakanaka. IHotel Pennsylvania haizovhurike, ichikundwa nedenda regore rino rapfuura re COVID-19 uye makore ekudzivirira nhete nzvimbo yekucheka. Ihotera yechina pakukura muNew York City yaive panzvimbo yakanaka, mhiri kubva kuMadison Square Garden nePenn Station, ichiita nzvimbo yekumira uye inodhura kune vafambi nevanoenda kumakonzati zvakafanana.
Ihotera yakavakwa nePennsylvania Railroad uye yakazowanikwa neStatler Hotels, ikava iyo Hotel Statler.
Ihotera iyi yakazotumidzwazve zita mushure mekunge yatengeswa kuna Conrad Hilton muna 1954 payakazove iyo Statler Hilton ndokuzoshandukira kuNew York Statler mushure mekutengeswa muna 1979.
Dzimwe shanduko dzekushandurwa dzakachinja zita rayo ranzi New York Penta, ndokuzopedzisira rapedzisira rave muPennsylvania Pennsylvania.
IHotel Pennsylvania yakavakwa nePennsylvania Railroad uye yaishandiswa naEllsworth Statler. Yakavhurwa muna Ndira 25, 1919 uye yakagadzirirwa naWilliam Symmes Richardson wefemu yeMcKim, Mead & White, iyo yakagadzirawo yekutanga Pennsylvania Station iri mhiri kwemugwagwa.
Statler Hotels, iyo yaive yakabata Pennsylvania kubva pakuvakwa kwayo, yakawana nzvimbo yacho chaipo kubva kuPennsylvania Railroad musi waJune 30, 1948, ndokuitumidza zita kuti Hotel Statler muna Ndira 1, 1949. Mahotera ese 17 eStler akatengeswa kuna Conrad Hilton muna 1954 uye iyo hotera yakave Iyo Statler Hilton muna 1958. Yakashanda pazita iri kusvika 1979, apo Hilton akatengesa hotera kune anovandudza William Zeckendorf, Jr., pamadhora makumi maviri nemana emadhora. Ihotera yakanzizve iyo New York Statler uye yaishandiswa neDunfey Mhuri Mahotera, chikamu cheAer Lingus. Ihotera iyi yakatengeswa zvakare nemamiriyoni makumi mana emadhora muna Nyamavhuvhu 46. Mari inosvika makumi mashanu muzana yakatengwa naAbelco, boka rekudyara rinosanganisira vavaki Elie Hirschfeld, Abraham Hirschfeld naArthur G. Cohen, pamwe ne1983% yakatengwa neketani yePota Hotels. , mubatanidzwa weBritish Airways, Lufthansa, uye Swissair. Varidzi vatsva vakatumidza zita rekuti hotera iyo New York Penta uye vakatanga kugadzirisa kukuru. Muna 50, shamwari dzaPenta dzakatenga danda reketani muhotera ndokudzosera kuzita rayo repakutanga, Hotel Pennsylvania.
Kune huwandu hwakaenzana hwenhoroondo muhotera hombe iyi, kunyanya The Glenn Miller Orchestra's “Pennsylvania 6-5000.” Kusvikira kutanga kwaMay 2021, iwe uchiri kugona kufonera 212-PE6-5000, uye unzwe iyo refrain "Pennsylvania 6-5000" usati wabatana neanoshanda. Yakanga iri yakareba kushandisa kushandiswa kwenhamba yefoni muNew York. Kubva panguva yawakafonera hotera, mimhanzi uye nhoroondo zvaive zvichikukoka kuti urangarire iyo hombe tsika yePennsylvania Pennsylvania.
Iyo Café Rouge pakutanga yaive mainstaurant hombe muHotel Pennsylvania. Yakashanda sekirabhu yeusiku kwemakore mazhinji, asi ikozvino inoshanda senzvimbo yakaparadzaniswa kubva kuhotera zvachose, senzvimbo yakawanda-yechinangwa. Ndiyo yega nzvimbo muhotera iyo yakapunyuka shanduko dzakakosha panguva yekuvaka kukuru kwema1980.
Mukupera kwema1930 uye kutanga kwema1940, Iyo Café Rouge yakanga iine hombe bhendi kure kure kubatana neNBC Red Network (mushure megore ra1942, iyo NBC Radio Network) uye yakazozivikanwa nemitambo yekurarama yakaitirwa mukati. Multiple maartist akatamba kuCafé - senge The Dorsey Brothers, Wood Herman, Count Basie, Duke Ellington, uye The Andrews Sisters.
Mamwe manheru munaNovember 1939, tichiri mukati mekubata-bata kwenguva refu kuCafé Rouge, mutungamiri webhendi Artie Shaw akasiya bhendi pakati pemaseti ndokufunga kuti anga ave nezvakakwana zvebhizimusi rebhendi uye nehana yese yekuve, mune gore nehafu, mutungamiri webhendi hombe rinozivikanwa kwazvo munyika. Shaw akasiya basa bhendi rake ipapo, chiitiko chinosungira The New York Times kuti vataure mune yekunyora.
Munguva ya1940-42, iyo Glenn Miller Orchestra zvakare yakadzokorora kubhucha kwenguva refu mukamuri mukati memakore matatu ekuratidzwa kwepamusoro kwaMiller semutungamiriri. Orchestra yaMiller inotepfenyurwa kubva kuCafé; mamwe akanyorwa naRCA Victor. Shaw mukuru orchestrator kubva muna 1937-39, Jerry Grey, akabva angopihwa basa naMiller semurongi wevashandi apo Shaw akasiya boka rake; paive panguva yaMiller's 1940 yekuita pahotera iyo Grey akanyora rwiyo "Pennsylvania 6-500" (ine mazwi akazowedzerwa naCarl Sigman) yakashandisa nhamba yefoni yeHotel, 212-736-5000, yaive foni yeNew York nhamba mukushandisa kwakapfuura kwenguva refu, bhendi raLes Brown, nemunyori waro Doris Day, vakaunza rwiyo rwavo "Sentimental Journey" kuCafé munaNovember 1944.
New York City Landmarks Preservation Commission yakaongorora Café Rouge yemamiriro ekumisikidza pachishandiswa mapepa ekuongorora akagadzirwa neHotel Pennsylvania Preservation Society (yaimbova Save Hotel Pennsylvania Foundation). Musi waGumiguru 22, 2010, iyo Café yakarambwa semumiriri wekumaka, kunyanya nekuti 15 Penn Plaza chirongwa chakabvumidzwa uye zvine mwero, asi kwete shanduko dzinoparadza dzemukati kubva pakuvakwa kwayo. Iyo 15 Penn Plaza chirongwa chingadai chaisanganisira kuputswa kweCafé.
Mazhinji emukati mekushongedzwa kwemukati anoramba akasimba. Iyo nheyo nedenga rakavezwa uye zvimwe zvekuvaka zvasara, kunyangwe imba yese, pamwe nedenga, zvakapendwa pamusoro zvichena. Zviitiko zvakawanda kubva muna 2013 New York Fashoni Vhiki yakaitirwa muCafé Rouge.
Muna 2014, iyo Café Rouge yakashandurwa ikava imba yemukati yebhasikiti inozivikanwa seTerminal 23, kurangarira kuvhurwa kweMelo M10 neJordani Brand chikamu cheNike. Inopa nzvimbo yevechidiki uye vatambi vechikoro chesekondari.
Doris Dabish anoti:
Nyamavhuvhu 28, 2021 pa22: 02
Zvinosuruvarisa kuzviona padyo, zvakaenda kumisangano mizhinji yezvokurapa imomo mumakore makumi matatu nemashanu apfuura. Yange iri nzvimbo yemusangano kwatiri kwemakore makumi mashanu.